Ihe iri kacha elu ka ị ghara idobe n'ime ime ụlọ gị, kwụsị ime nke a
Ndewo obere obere sandwiches m. Freshness, freshness, a na m agwa gị nke ahụ, mana n'eziokwu ọ bụghị okwu freshness na-abata m n'uche mgbe m na-anụ isì na-esi n'ụlọ gị. Na ezi ihe kpatara ya, ọ na-esi isì ochie nke jacky musty nọ ebe ahụ. Na-a drunkụbiga mmanya okè? Echegbula onwe gị, anyị bịara ebe a iji zọpụta gị na nsogbu a, n'ihi na isi ma ọ bụ na ọ bụghị, enwere ọtụtụ ihe ị ga - aka mma ịhapụ ịhapụ n'ime ụlọ gị.
Mgbe ịmechara ihe ị chọrọ.
Mana anyị ga-adọ gị aka na ntị.
Ekwula na ị maghị.
1. Akpụkpọ ụkwụ gị nke ọma deg '
Ọ nwere ezi uche, mana anyị na-ekwu ya ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ka ndị na-ehicha ihe ọcha ma debe akpụkpọ ụkwụ gị ebe niile n'ụlọ, anyị ka na-adụ gị ọdụ ka ị hapụ ihe ndị a rụrụ arụ juputara na nkịta na nduru na-edina na syphilis na ụkwụ akwa gị.
2. Oti mkpu na ekwentị gị
Ruo afọ iri, ndịahịa elekere mkpu dara. Ezighi ezi dochie anya ụdaolu nke anyị smartphones. Ma nke ahụ bụ ihe ihere n'ihi na n'eziokwu, anyị ga-aka mma ịhapụ ekwentị anyị n'akụkụ akwa na ebe anyị na-ehi ụra. E wezụga eziokwu na ọ na - ewetara gị nsogbu dị mkpa, o yiri ka ụda ekwentị ọ na - akpata nrụgide karịa ihe ọ bụla ọzọ. Na ọbụlagodi na anyị nwere ọtụtụ ndụmọdụ maka ibili n'ụtụtụ yabụ emela ka à ga-asị na ị maghị.
3. Foto ezinụlọ gị
Amaghị m ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị dị egwu na-edebe foto ezinụlọ (gụnyere ndị nwụrụ anwụ) na nkwụsị abalị ha ma mara na ọ bụghị ezigbo feng-shui. Uringnagide anya nke ndị nna nna gị mgbe ị na-ehi ụra nwere ike ịbụ nrụgide ma mee ka o siere gị ike ihi ụra. Ọfọn, emela ụmụaka n'onwe gị, kedu ihe na-emebi emebi na-egbochi gị ihi ụra n'akụkụ foto nne gị na-atụgharị.
4. Gị gia makar na-egwu egwuregwu
Ugbua n’ihi na ọkwọ ụgbọ mmiri na-ewere ohere. Ma ihe ọzọ, ọ jọgburu onwe ya. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ịnweghị uto ma ị nwere okpueze jupụtara na Savoyard fondue, anyị na-adụ gị ọdụ kama wedge ngwaọrụ n'ime ime ụlọ ma ọ bụ n'ime ụlọ ọ bụla na-abụghị ime ụlọ (na-adabere n'eziokwu n'elu ụlọ gị, amaara m iji nwee olile anya na ị naghị ezube idobe onye na-akwọ ụgbọ mmiri n'ime ụlọ nke 9m²). Egwuregwu egwuregwu nwere ọdighi mma iji mee ka ị nwee obi amamikpe mgbe ị na-ele ya n'ihi na ị naghị eji ya. Yabụ, inwe obi amamikpe n'abalị mgbe ị lakpuru ụra ma ọ bụ n'ụtụtụ mgbe ị tetara n'ụra n'ihi na ị jitụbeghị onye na-enye ọzụzụ ọzụzụ dị mma abụghị ihe dị mma maka ọdịmma ime mmụọ gị.
5. Worklọ ọrụ gị
Na Covid (obere ọrịa nke na-agbanwe ndụ ọnwa ole na ole ugbu a, ọ bụrụ na ị nụla banyere dossier, I ce pa) na ọrụ tele soro ya,niile ga-emezigharị ebe obibi anyị iji mejupụta ebe a na-arụ ọrụ (n'okwu a, anyị na-akwado nhọpụta anyị
ngwaọrụ ndị dị mkpa maka tele serene
), mana na-enweghị atụ, ịrụ ọrụ na kọmpụta gị n'ime ụlọ gị anaghị atụ aro na ha niile. Maka ịrụ ọrụ telegram ka mma, ọ kachasị mma ịhapụ ndị ebe ezumike na ndị ebe ị na-etinye uche.
6. Akwụkwọ ndị ị na-agụbeghị
Ka anyị kwuo eziokwu, shelf anyị juputara na akwụkwọ ndị anyị na-agụbeghị (akwụkwọ akụkọ Marcel Proust dum) karịa akwụkwọ ndị 'anyị na-agụ (Tom-tom na Nana). Ọfọn, akwụkwọ ndị a anyị na-ekwe nkwa ịgụ maka afọ 12 nwere nnukwu ikpe ọmụma: ị nweghị ịgụ. Inwe ha n’akụkụ ihe ndina gị ga-eme ka anyị laghachi na nkwenye dị mkpa nke ọdịda.
Ngwọta abụọ ga - ekwe omume:
- kpalie akwụkwọ ndị ahụ na - ebu ikpe ọmụma buru ibu.
- gụọ ha.> 7. Heating
Ọbụlagodi na ọ dị oke oyi, ọ ga-eme ka ọ ghara ikwe omume ikpo ụlọ gị ọkụ, opekata mpe karịa 17 Celsius C. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji adụkarị ndụmọdụ ka ị ghara ịhapụ ikpo ọkụ n'ime ụlọ. Ozi ọma, ọ ga-azọpụta gị
8. Bullshit ka nri na
Inwe achịcha, ibe ma ọ bụ chocolate mgbe ị na-ehi ụra bụ echiche kachasị njọ n’ụwa (mgbe bọmbụ nuklia). Kwesighi ịbụ Einstein ịmara nke ahụ (Can nwere ike iche n'echiche ma ọ bụrụ na Einstein mere nchọta ahụ kama ịmekọrịta ya?). TV
Ọ bụ ezie na ọ na-adọrọ adọrọ ịnwe teloche n'akụkụ akwa iji lee ihe nkiri na usoro ruo ugbu a, ọ na-akụda mmụọ siri ike. Ugbua n'ihi na ị na-ahapụ ndụ mmekọahụ gị (ọ bụrụ na ị nwere nke ọ bụla nwere), mana karịa ihe niile ọ bụ ụzọ kachasị mma iji gbuo ụra gị. Amaghị m ma ọ bụrụ na ịmara echiche nke "A machibidoro iwuN'IME AKW TWOKWỌ AKW TWOKWỌ AB TWOỌ ABEFỌ TUPU TUPU GOB SR ”butR” "mana TV bụ akụkụ ya.
10. Pusi gị
Ọ dị mma, OK ọ makụọ, Ọ masịrị ya na ọ na - enyere gị aka ịrahụ ụra. Mana onye nwe nwamba ọ bụla ga - agwa gị: ndị a na - akụda iberibe a ga - etinye gị nro n'abalị ọ bụla. Nke ahụ bụ otu o si dị, nwamba na-alụ ọgụ maka ụra ụra gị, ha ga-enwe ọgba aghara na 4am, 6am, 7am, tupu ịlaghachi ụra nke ọma maka ụtụtụ ụtụtụ 5 nkeji tupu mkpu gị apụ. A>
11. Almdị Bọmbụ Napalm
Ọ bụ ezie na ọ na-anwa anwa, ụdị ihe a anaghị atụ aro n'akụkụ akwa gị ma ọlị, ọkachasị maka ebumnuche mara mma.
isi mmalite: Brightside